Bogga hore -
Dhammaan qoysasku mar uun wey u baahan kaalmo.
Lastensuojelu.info- waxaad ka heleysaa xogo aasaasiya adeegyada qoysaska carruurleyda Finland luuqado kala duwan ku qoran. Beejkaas waxaa loogu talogaley qaas ahaan waalidiinta ajaanibta iyo shaqaalaha xirfadleyda ah eey wada shaqeynta ka dhexeeyso.
Bulshada ayaa siyaabo badan ku caawisa qoysaska carruurleyda waxaana jira adeegyo marxaladaha kala duwan ee nolosha looga caawinnayo. Talosiin iyo kaalmo intaba waxey ka helayaan degmadooda adeega carruurta iyo qoysaska, hay’adaha iyo ururuda iyo weliba mowlac masiixiyeedka iyo urur diimeedyada kale.
Lastensuojelu.info has been renewed!
The new site has just been launched. If you notice any technical errors or deficiencies in the content, please give us feedback!
Dhamaan carruurta iyo qoysaska carruurleyda waxay qeyb ka yihiin dastuurka wadanka. Dastuurka Finland waa mid mudnaan lagu siiyey bulshada, heshiisyada caalamiga. Carruurtuna mida u muhiimsan waa sida uu qabo heshiiska QM.
Finland deegaanka ayaa u caawiya waalidka iyo carruurta siyaabo kala duwan. Waxaa jira adeegyo badan oo dadka ka dhaxeeya, sida rugta dhalaanka iyo hooyooyinka barbaarinta hore/xannaano ama iskuulka.
Dhammaan qoysasku mar uun wey u baahan kaalmo. Mararka qaar waxaa dhacda dhibta iyo walbahaarka inuu sii bato markaasna waa muhiim in, kaalmo lahelo. Sheekadan dhabta ah waxaa looga hadlayaa kaalmo sidee ah ayey ka heleen qoysaska ajaaniibta adeega qoyska iyo carruurta iyo ururada.